Maitiro Ekuwedzera Anobhadharwa Mitezo kune Yako WordPress Siti | Martech Zone
Chishanu, December 6, 2013 Muvhuro, June 8, 2015 Douglas Karr
Mumwe wemibvunzo yandinoramba ndichiwana ndeyekuti ndingave here kana kwete ini ndinoziva nezvehunhu hwakanaka hwekubatanidzwa kweWordPress. WishList ipakeji yakazara iyo inoshandura yako WordPress saiti kuita yakazara-inoshanda inhengo saiti. Kupfuura makumi mana emakumi mana eWordPress masaiti atove kumhanyisa software iyi, saka zvinoratidzwa, zvakachengeteka uye zvinotsigirwa!
WishList Nhengo Saiti Nzvimbo Inosanganisira
Nhengo dzeMitezo Isingagumi - Gadzira sirivha, goridhe, Platinum, kana chero mamwe matanho aunoda! Chaja zvakawanda kumazinga epamusoro ekuwana - ese ari mukati meblog rimwe chete.
WordPress Yakabatanidzwa - Kunyangwe iwe urikuvaka saiti nyowani kana kusanganisa neiyo iripo WordPress saiti, kuisa WishList zvinongoda kuburitsa iyo faira, kuiisa, uye kumisikidza iyo plugin!
Zvichienderana Nhengo Sarudzo - Gadzira Mahara, Kuedzwa, kana Kubhadharwa nhengo dzemitezo - kana chero mubatanidzwa wevatatu.
Nyore Nhengo Management - Tarisa nhengo dzako, yavo kunyoresa chinzvimbo, nhengo chikamu, uye zvimwe zvakawanda. Nyorera zvirinyore nhengo, dzifambise kuenda kumatanho akasiyana, imbomira kuve kwavo, kana kudzima zvachose.
Sequential ZveMukati Dhirivhari - Vakapedza kudzidza nhengo dzako kubva kune imwe nhanho kuenda kune inotevera Semuenzaniso, mushure memazuva makumi matatu, iwe unokwanisa kusimudzira nhengo kubva kuFree Trial kuenda ku sirivha Level.
Kudzora Kuonekwa Zviri Mukati - Ingotinya bhatani "Hide" kuchengetedza zvakasarudzika zvemukati enhengo dzeimwe nhanho. Gadzira "modular" nhengo uye uvanze zvemukati kubva mamwe mazinga.
Ngoro yekutengera Kubatanidza - Seamlessly inosangana pamwe neanozivikanwa kwazvo masisitimu engoro yekutengera, kusanganisira ClickBank, uye zvimwe zvakawanda.
Multi-Chikamu Kuwana - Ipa nhengo dzako mukana wekuwana akawanda mazinga mukati memitezo yako. Semuenzaniso, gadzira nzvimbo yepakati yekurodha nekuwana kupihwa kune nhengo dzese matanho.
Shandisa yedu yakabatana link uye
Tags: WishlistWordPresswordpress nhengoWordpress nhengo plugin